नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा हुँदै « Lokpath
२०७५, ६ कार्तिक मंगलवार ०६:२६
प्रकाशित मिति : २०७५, ६ कार्तिक मंगलवार ०६:२६
ललितपुर । ग्रामीण तथा शहरी विकासका लागि नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अर्को साता राजधानीमा आयोजना हुँदैछ । बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनिरिङ अध्ययन संस्थानको आयोजनामा यही कात्तिक १२ देखि १४ गतेसम्म काठमाडौंमा हुन लागेको सो सम्मेलनमा नेपाललगायत करीब २० देशको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा देश र विदेशका गरी करीब ८० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने र झण्डै २ सय ५० जना ऊर्जाविद्को सहभागिता रहने ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. श्रीराज शाक्यले जानकारी दिए ।
शेयर खरीद बिक्रीको रकम समयमै नआएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? अब हुदैंछ सहज
काठमाडौँ– तपाईंले खरीद वा बिक्री गरेको शेयर दुई कार्य दिनमा नै राफसाफ हुने